सातामा दुई दिन बढ्यो सुनको मूल्य, मूल्यको उतारचढाब सामान्य
भदौ २७, काठमाडौं । यो साता सुनचाँदीको मूल्यमा खासै उतारचढाब देखिएको छैन । कोरोना महामारी बढेसँगै उकालो लाग्ने थालेको सुनचाँदीको मूल्य पछिल्लो समय भने घट्दो क्रममै रहेको देखिएको छ ।
गत साताको अन्तिम दिन भदौ १९ गते शुक्रवारको मूल्यको तुलनामा सुनको मूल्य प्रतितोला रू.१०० ले बढेको छ । चाँदीको मूल्य भने उक्त दिनकै मूल्यमा स्थिर रहेको छ । अरु व्यवसाय जस्तै सुनचाँदीको व्यवसाय पनि यो बेला ठप्प जस्तै छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले लकडाउन शुरु भएसँगै केहि समय स्थगित गरिएको सुनचाँदीको मूल्य दर सार्वजनिक कार्यलाई पछिल्लो समय निरन्तरता दिंदै आएको छ ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्यदरको आधारमा भदौ २१ गते यता दुई दिन सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
यो साता सुनचाँदीको मूल्य दुई दिन बढेको छ भने दुई दिन घटेको छ ।
साताको पहिलो र दोस्रो दिन स्थिर रहेको सुनचाँदीको मूल्य तेस्रो दिन भने घटेको थियो ।
त्यस दिन साताकै न्यून मूल्य छापावाल सुन प्रतितोला रू. ९५ हजार ८०० र तेजावी सुन प्रतितोला रू. ९५ हजार ३०० मा झरेको थियो । चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला रू. १० ले घटेर प्रतितोला रू. १ हजार ३१० मा झरेको हो ।साताको चौथो र पाँचौ दिन सुनचाँदीको मूल्य बढेको थियो भने साताको अन्तिम दिन घटेको हो ।
दुई दिन लगातार बढेको छापावाल सुनको मूल्य साताको पाँचौ दिन भदौ २५ गते प्रतितोला रू. ९६ हजार ८०० पुगेको थियो भने तेजावी सुनको मूल्य रू. ९६ हजार ३०० थियो । सातामा सुनचाँदीकै मूल्य उच्च भएको दिन चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला रू. १ हजार ३२५ कायम भएको थियो ।
अन्तिम दिन भने अघिल्लो दिनभन्दा प्रतितोला रू. ३०० ले घटेर छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ९६ हजार ५०० र तेजावी सुनको मूल्य रू. ९६ हजार कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो दिनभन्दा रू. १५ ले घटेर प्रतितोला रू.१ हजार ३१० कायम भएको छ ।
यो साता सुनचाँदीको मूल्यमा आएको परिवर्तनको अवस्था :
स्रोत : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ